Imbali emfutshane ye-Plasma Television
Umboniso wokuqala wokujonga umboniso we-plasma wenziwa ngo-1964
Ipropotype yokuqala yovavanyo lwama-plasma yenziwa ngoJulayi 1964 kwiYunivesithi yase-Illinois ngabaprofesa uDonald Bitzer kunye neGene Slottow, kwaye umfundi waseGrown uDavid Willson. Nangona kunjalo, bekungekho emva kokufika kweedigrikhi kunye nezinye ubuchwepheshe obubhekiselele kumabonakude e-plasma. Ngokutsho kwe-Wikipedia "umboniso we-plasma ngumboniso ocacileyo wepaneli apho kukho ukukhanya okudalwe yi-phosphors evuywe yiplasma yokukhupha phakathi kweepaneli zeplastiki ezimbini."
Ngexesha lemashumi anesithandathu, iYunivesithi yase-Illinois isebenzisa iithelevishini eziqhelekileyo njengengqwalasela yekhompyuter kwi-network computer. UDonald Bitzer, uGene Slottow kunye noRobert Willson (abaveleli abadweliswe kwi-patma display patent) bacwaninga iimbonakalo ze-plasma njengenye indlela eya kusetyenziselwa iifowuni ze-tube-based based televisions. Umboniso we-cathode-ray kufuneka uhlaziye rhoqo, olungile kwividiyo nakusasazo kodwa kungalunganga ukubonisa imifanekiso yekhompyutheni. UDonald Bitzer waqalisa le projekthi waza wacela uncedo lukaGene Slottow noRobert Willson. NgoJulayi ka-1964, iqela layakhela ipaneli yokubonisa iplasma kunye nesinye enye iseli. Iithelevishini zeplasma zamhlanje zisebenzisa izigidi zeeseli.
Emva kowe-1964, iinkampani zethelevishini zazisasaza ukuphuhlisa ithelevishini ye-plasma njengenye indlela kumabonakude usebenzisa i- cathode ray tubes . Nangona kunjalo, ukuboniswa kwe- LCD okanye i-crystal display kwenza iteknoloji yecwecwe yecala ebonakalayo eyenza uphuhliso olongezelelweyo lwentengiso ye-plasma.
Kwathatha iminyaka emininzi ngethelevishini yeeplasma ukuba iphumelele kwaye ekugqibeleni yenza ngenxa yemizamo kaLarry Weber. Umbhali waseYunivesithi wase-Illinois uJamie Hutchinson wabhala ukuba umboniso kaLarry Weber wokubonakalisa i-plasma engamashumi ayisithupha-intshi, eyenzelwe iMatsushita kwaye ithwale iteksi yePanasonic, idibanise ubungakanani kunye nesisombululo esifanelekileyo kwi-HDTV kunye nokongezwa kobuncinci.
Imbali yeCone Cream Cone
I-15 Ininzi I-Hilarious Screaming Goat Videos
10 Iingxoxo eziqhelekileyo zokulwa nomtshato wamaGay
Indlela yokujonga nayiphi na imeko yokuBhaliswa kweSikolo se-Inthanethi kwiNgcaciso enye okanye ngaphantsi
Umkhombe waseChavet (eFransi)
Uguqulelo lweelwimi: Amagama aphindwe kabini - Ulwimi lwaseJamani - uEzzett